Nutrition – Page2– Healthy Life Journal
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးတွေကို သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစာတွေစားပြီး ညီညွတ်မျှတတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးရရှိစေချင်ပါတယ်။ အခုခေတ်ကလေးတွေက ကျောင်းနဲ့ကျူရှင် သွားနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ အနည်းဆုံး အားကစားတစ်ခုခုလောက်တော့ လုပ်စေချင်ပါတယ်။...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသည်းကို ဖိုက်ဖရိုစကင်ရိုက်တော့ နည်းနည်းခြောက်ချင်သလိုပဲလို့ သိရပါတယ်။ အရက်လည်းဖြတ်ပြီးပါပြီ။ ဘီပိုး၊ စီပိုးမရှိပါဘူး။ အသည်းပြန်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်ရမလဲ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Kyaw Thu Myint (FB) A. အသည်းခြောက်တာ...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး ရှိသူတချို့က ဆေးမြီးတိုတွေ သောက်ကြတယ်။ အစားအသောက် ဘာဖြစ်ဖြစ် စားလို့ရတယ် ပြောကြတယ်။ ကျွန်မမှာ စီပိုးရှိလို့ မျှဝေပေးပါဦးလား။ LM(FB) A. ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိသူတွေမှာ...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. အာဟာရဓာတ်တွေအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. လူတွေအစာစားတဲ့အခါ ဆဲလ်တွေ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ရရှိစေပါတယ်။ အာဟာရမှာ Macronutrients နဲ့ Micronutrients ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။...
ငွေကြယ်စင်ယံ သွားရောဂါဝေဒနာတွေ ရလာတဲ့အခါ ကလေးတွေမှာ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ သွားပိုးစားတာက ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များဆုံးရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သွားတွေက ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ဖော့စ်ဖိတ်တို့လို သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ အထူးတည်ဆောက်ထားတာကြောင့် သွားတွေခိုင်ခံ့ကျန်းမာစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ဒီသတ္တုဓာတ်တွေရရှိအောင် အောက်ပါအစားအသောက်တွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) နွားနို့ နွားနို့ထဲမှာ...
Q. ကလေးနို့တိုက်တဲ့အချိန် ဘာတွေစားသင့်ပါလဲ ဆရာမ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. ကလေးနို့တိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင် မိခင်တွေအနေနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝအောင် ပိုမိုစားသောက်ရပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိတုန်းက စားတိုင်း ကယ်လိုရီထက် ၅၀ဝ ယူနစ် ထပ်ဆောင်း စားသောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်လောင်းတွေအတွက်...
Q. ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုက ဘယ်အချိန်က စတင်ဖြစ်ပေါ်လဲ ဆရာမ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) A. ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ သူ့ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကတည်းက စပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ငါးလက စတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆို ဦးနှောက်စဖြစ်လာမယ့်...